WordPress २.१ यहाँ छ ... Hmmmm | Martech Zone
मङ्गलबार, जनवरी 23, 2007 मङ्गलबार, जनवरी 23, 2007 Douglas Karr
निर्णायक बाहिर छ ... म WordPress 2.1..१ मा अरूले चिम इन गर्न कुर्दै छु तर यहाँ मेरो प्रारम्भिक छ:
खुशी छ उनीहरूले केहि मेनू विकल्पहरूको नाम बदले - बग्रोरलले लिंक र टिप्पणीहरूको तुलनामा अधिक अर्थपूर्ण बनाउँछ छलफल भन्दा छलफलको लागि उत्तम छ।
म OSX मा छु र brow ब्राउजरहरू, सफारी, क्यामिनो र फायरफक्स २ लाई प्रयास गरिरहेको छु र कुनैले पनि मैले अपलोड गरेको छविहरू ब्राउज गर्न अनुमति दिँदैन। अद्यावधिक: विन्डोज एक्सपीमा इन्टरनेट एक्सप्लोरर tried को पनि प्रयास गरियो र उही मुद्दा थियो।
उम्म ... सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाईले अपग्रेड गर्नु अघि तपाईका प्लगइनहरू असक्षम पार्नुहोस्। ओहो… मेरो साइट एक घण्टा सम्म धेरै स्केचि थियो त्यसैले मैले केहि पुनर्निर्माण गरेँ।
मसँग एकल प्लगइन थिएन कि भाँचियो ... तर म साइट फेरि प्राप्त गर्न प्रत्येक एक पुन: सक्रियण गर्न सकेन।
प्रशासन थोरै सुस्त देखिन्छ ... म मात्र हुन सक्छ। म स्वत: बचत समारोह जस्तै गर्छु !!!
यदि मैले अपलोडहरू प्रबन्ध गरें भने ... खाली स्क्रीन पनि।
तपाईं के सोच्नुहुन्छ? छविहरू ब्राउज गर्न र सम्मिलित गर्न असमर्थ हुनु वास्तवमै मलाई मार्दैछ। (म तिनीहरूलाई कुनै समस्या बिना नै अपलोड गर्न सक्षम छु)। मैले केहि क्लाइन्टहरू अपडेट गरिरहेको छैन जब सम्म मैले केहि सुन्दिन।
फायरफक्स ह्याक: कीवर्डहरू प्रयोग गरेर मेरो ब्लगमा खोजी गर्नुहोस्
जनवरी 23, 2007 मा 11: 15 एएम
मैले थप नसुन्दासम्म म अपग्रेडमा केही समयको लागि रोकिरहेको छु। मैले पहिले नै धेरै प्लगइनहरू काम नगर्ने बारे धेरै अपग्रेड डरावनी कथाहरू पढेको छु।
जनवरी 25, 2007 मा 9: 25 एएम
म अहिले Admin मा लगइन गर्न सक्दिन। म केहि प्लगइन मेटाउन जाँदैछु कि यसले मद्दत गर्छ कि भनेर हेर्नको लागि।
जनवरी 25, 2007 3:21 बजे
केवल एक अद्यावधिक ... यो देखिन्छ कि मेरो विषयवस्तुमा केहि अनुकूलन प्रकार्यहरू थिए जुन डाटाबेस परिमार्जनहरूमा राम्रोसँग लिएनन्।